10 Manesoeso maimaim-poana izay tokony ho fantatry ny mpamolavola rehetra. Famoronana an-tserasera
Voaporofo fa ny ankamaroan'ny hevitra tsy, nefa tsy hoe ratsy izy ireo, fa satria aseho tsara izy ireo. Azoko antoka fa raha mahatsapa ianao fa manintona ny tontolon'ny famolavolana sary, ary vao mainka aza raha anisan'izany ianao amin'ny maha mpamorona anao dia tsapanao fa tena zava-dehibe ny fampisehoana ny asanao. Angamba zava-dehibe izany na dia amin'ny asanao aza satria tsy ny zavaboarintsika ihany no miresaka momba antsika sy ny fahaizantsika, fa koa ny fombantsika izay manana, ny seho fampirantiana na fampisehoana izay anoloranay ny noforoninay raha jerena ny mpanjifa sy ny sehatra. mibodo azy ireo.
Azo antoka fa amin'izao fotoana izao dia efa nijery portfolio maro an'isa matihanina lehibe eo amin'ny sehatra misy antsika ianao ary raiki-pitia tsy amin'ny asany mahafinaritra fotsiny, fa amin'ny kalitao sy ny hakantony mahafinaritra ihany koa raha ny fampirantiana azy ireo. Ny fanovana miloko, madio, kanto ary voadio dia miaraka amina endrika mahavariana. Ny zava-drehetra ary ny zava-drehetra dia voalamina sy karakaraina mba hanombohana ny endrika ary manaitra ny fihetseham-po sy ny valiny tsara avy amin'ny mpividy.
Azo inoana fa mihoatra ny indray mandeha ianao no nihevitra ny hanova ny paikadinao hanehoana ny asanao tsara indrindra ary hanombohana a fifandraisana mivantana eo amin'ny asanao sy ny mpanjifanao. Mety efa nanandrana nandinika bebe kokoa ilay lafiny hita maso ianao, nanadio ny fahalalanao sary ary nitady scenario tsara. Na dia zavatra tena mahaliana aza ity, ny marina dia tsy mahaliana fa tsy ny mpamorona rehetra no afaka manokana fotoana rehetra tianay hiasa amin'ity karazana antsipirihany ity ary na dia kely kokoa aza mba hahazoana kalitao avo lenta na farafaharatsiny amin'ny ambaratonga doka azo ekena.
1 Inona no atao hoe fanesoana?
2 Tombontsoa amin'ny fampiasana mockups ho an'ny volavolanao
2.1 Manome lanja fanampiny ny volavolainay izy ireo
2.2 Azo antoka fa namorona hevitra izy ireo ary nampiditra azy io tamina tontolo tena izy
2.3 Izy ireo dia mameno ny fampahalalana sy ny feon'ny vokatray
2.4 Izy ireo dia mamorona vokatra fiaraha-miory tsy azo ihodivirana amin'ny mpandray
3 Ny fanesoana tsara indrindra alaina
3.1 Fanesoana birao na latabatra fiasana
3.2 Fanesoana olona
3.3 Fanesoana ny boky
3.4 Fanesoana ny boky fomba fijery
3.5 Fanesoana dokam-barotra any ivelany
3.6 Fanesoana ny magazina sy ny katalaogy
3.7 Fanesoana amin'ny sary
3.8 Fanesoana finday avo lenta sy finday
3.9 Fanesoana karatra orinasa
3.10 Fanesoana vinyl sy zavatra
Inona no atao hoe fanesoana?
Angamba mbola tsy fantatrao ny tontolon'ny modely nomerika na ny fanesoana, tsy isalasalana fa ny firaisana tsara indrindra amin'ny mpamorona ankehitriny. Mbola tsy fantatrao izay atao hoe fihomehezana? Izy io dia fanesoana nomerika na maodely feno amin'ny famolavolana na fitaovana ampiasaina amin'ny fampisehoana, fanombanana ny famolavolana, fampiroboroboana ary tanjona hafa izay mihoatra ny mpamorona sary - tontolon'ny mpanjifa.
Ireo mockups nomerika amin'ny ankapobeny dia mazàna fisie amin'ny endrika PSD (tera-tanan'ny Adobe Photoshop) ary amin'ny alalàn'izy ireo dia ahafahantsika mamorona atmosfera mahatalanjona sy seho nomerika (na dia eny, tena zava-misy tokoa) sy idiran'ny tontolon'ny dokam-barotra mitaky be indrindra.
Tombontsoa amin'ny fampiasana mockups ho an'ny volavolanao
Matetika ny mockup dia tena mety ao anatin'ny asantsika noho ny antony maro:
Manome lanja fanampiny ny volavolainay izy ireo
Tena mora azo izany ary hametraka ohatra iray amin'ny sary be indrindra aho (pun tin). Andao hiresaka momba ny fonosana, alohan'ny hahatongavan'ny endrika sary eo amin'ny tontolon'ny varotra amin'ny alàlan'ny famonosana sy kaontenera, tsy nisy nieritreritra ny vokany tsara amin'ny ambaratonga kanto ary mazava ho azy amin'ny sehatra ara-barotra amin'ny fampisehoana vokatra.
Na izany aza, tamin'ny fahatongavan'ny revolisiona indostrialy, ny fanjifana ny mpanjifa ary ny fanjakana sosialy, dia nisy singa fanampiny nipoitra izay niditra tsy ho ela tamin'ny tsipika fivoriambe: ny fifaninanana sy ny filàna miavaka amin'ny ranomasina marika mpifaninana.
Tamin'izany no novolavolaina ny dokam-barotra ary io no iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra: hahatonga ny mpanjifa ho tia, handresy lahatra azy ary handresy lahatra azy amin'ny fomba rehetra sy ny saina dimy. Tamin'izany fotoana izany dia nanomboka namboarina ny fonosana manintona, izay nahasarika ny sain'ny vokatra. Tamin'izany fotoana izany, tsy ny vokatra amidy ihany, fa ny fivarotana traikefa, ny fahafinaretana amin'ny fahitana ary ny fanindronana ny maha-izy azy ary ny famoronana. Miaraka amin'ny fanesoana androany dia mitovy ihany ny zavatra mitranga.
Azo antoka fa namorona hevitra izy ireo ary nampiditra azy io tamina tontolo tena izy
Amin'ny ambaratonga ara-psikolojika dia zavatra manan-danja ihany koa izy io satria tsy mitovy ny maneho hevitra amin'ny alàlan'ny sary an-tsary fa tsy ny fampisehoana hevitra vita ary miorina amin'ny tontolo azo ekena 100% ary mety tsara ihany koa amin'ny fampivelarana ny asany.
Raha mila mamolavola sary famantarana ny marika fanaovana fanatanjahan-tena, ohatra, isika, dia vao mainka handresy lahatra sy ho matihanina kokoa raha manome an'ity logo ity amin'ny fitafian'ny atleta iray izay mankafy ihany koa ny zavatra ataony. Azo antoka fa tena misy io, manome antsika ny fahatsapana fa misy filàna manokana tafiditra sy mahafapo.
Tena noforoninay tokoa ny foto-kevitray.
Izy ireo dia mameno ny fampahalalana sy ny feon'ny vokatray
Izy ireo dia manohana ny tsirairay amin'ireo kalitao na fiasa voalaza fa novokarina sy novokarina. Ny tontolo nanoratanao anarana ny endriny iray dia afaka manamafy ny toetrany. Ao amin'ny ohatra napetrakay teo aloha, ohatra, ny soatoavina toy ny dynamism, ny fahazavana ary ny fahaiza-mampifanaraka dia hohamafisin'ny tontolo iainana, zavatra iray izay tsy isalasalana fa hanohana ny fomba fijery manerantany.
Izy ireo dia mamorona vokatra fiaraha-miory tsy azo ihodivirana amin'ny mpandray
Amin'izany no ankasitrahan'izy ireo ny fanekena azy amin'ny alàlan'ny vokatra maharesy lahatra ateraky ny fiarahana miabo. Ho an'izany rehetra izany, ny asantsika dia hampifandraisina amin'ny toerana tsara tarehy na soatoavina tsara toy ny dinamika, filaminana, fahadiovana na hatsarana. Hevero fa ny singa tsirairay izay miseho eo akaikin'ny volavolantsika dia hisy fiatraikany amin'ny fahitantsika azy ary dia hanampy antsika hangoraka bebe kokoa na latsaky ny fihetsem-pon'ny mahazo azy.
Lojika misy mockups an'arivony amin'ny karazany maro: Avy amin'ny mockup maimaim-poana ka hatramin'ny mockups karazana premium. Azontsika atao ihany koa ny mahita mockups static (natao ho an'ny endrika sary toa ny logo) ary koa ny mockups static raha mila manao fampisehoana telo-habe isika. Ho fanampin'izany, afaka mahita mockups amin'ny scenario samihafa sy tonika samy hafa ihany koa isika, tena resaka fikarohana io, na dia mazava ho azy aza aho androany te-hizara aminao izay heveriko ho fanesoana tena ilaina amin'ny mpamorona sary ankehitriny.
Ny fanesoana tsara indrindra alaina
Dia manolotra aho kopia mavesatra folo azonao hitanao maimaim-poana ao amin'ny banky mockup izay natolotray tamin'ny teboka teo aloha. Ankafizo izy ireo!
Fanesoana birao na latabatra fiasana
Fanesoana ny boky
Fanesoana ny boky fomba fijery
Fanesoana dokam-barotra any ivelany
Fanesoana ny magazina sy ny katalaogy
Fanesoana amin'ny sary
Fanesoana finday avo lenta sy finday
Fanesoana vinyl sy zavatra
Raha mila ianao fanesoana boaty na karazana fonosana hafa, ao amin'ilay rohy izay navelanay fotsiny dia hahita loharanom-pahalalana bebe kokoa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Fanesoana maimaim-poana 10 tokony ho fantatrao amin'ny maha mpamorona anao
fivoahana erotika dia hoy izy:
Mangatsiaka be! misaotra betsaka Lúa
Valio ny fivarotana erotika
Fercho (@FerchoJohan) dia hoy izy:
Tahirin-kevitra tena tsara amin'ny fampisehoana ny vokatra farany ... Misaotra betsaka amin'ny vaovao
Valiny tamin'i El Fercho (@FerchoJohan)
JorgeAriasG dia hoy izy:
Nieritreritra aho fa afaka misintona ireo fanesoana ianao: /
Valiny amin'i JorgeAriasG
Salvi gomez dia hoy izy:
Iván Díaz maka… .dia ho hitanao… .. !!!!
Valiny tamin'i Salvi Gómez
Samuel Marchán Fernández dia hoy izy:
Tsara tarehy izy ireo, saingy misy tsara kokoa
Valiny tamin'i Samuel Marchán Fernández